Rakkoo nageenyaa aanaalee daangaa Oromiyaa fi Somaalee – Kichuu
HomeAfaan OromooRakkoo nageenyaa aanaalee daangaa Oromiyaa fi Somaalee
Rakkoo nageenyaa aanaalee daangaa Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaarratti mudate hiikuuf hojjetamaa jira- naannicha
Finfinnee, Gurraandhala 16,2009(FBC) – Aanaalee daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaatti hidhattoonni naannoo Somaalee Ityoophiyaarraa ka’an rakkoo nageenyaa uumaa akka turan mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise.
Itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromyaa obbo Addisuu Araggaan akka jedhanitti, hidhattoonni naannoo Somaalee Ityoophiyaa keessaa ka’an kanneen naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii, Cinaaqsan, Miidhagaa Tolaa, Gursum, Mayyuu Muluqqee fi Baabbilee; godina Harargee lixaatti aanaa Bordoddee; godina Baalee aanaa Daawwee Sararii, Sawweenaa, Madda Walaabuu fi Raayituu; godina Gujii aanaa Gumii Idalloo fi Liiban; godina Booranaa aanaa Moyyaaleetti rakkoo nageenyaa uumaa turaniiru.
Obbo Addisuun akka jedhanitti kaayyoon qaamolee kanneenii lama.
Tokko daangaa babal’ifannaadha. Kanas haleellaa raawwachuun jiraattonni yeroo qayee isaanii gadhiisan laficha qabachuuf yaaludha.
Dhimmi daangaa naannoo lameeniis bara 1997 murtoo ummataan furmaata argachuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan gochaan daangaa babal’ifannaa fudhatama tokkollee hin qabaatu.
Kaayyoon inni lammaffaan diinagdeedha. Haleellaa raawwachuun waan argatan fudhatanii dheeffu. Haala kanaan ji’oottan lamaan darban lubbuun namaa darbeera. Qaamni hir’ateera. Qabeenyis saamameera.
Mootummaan naannoo Oromiyaas itti gaafatama guddaan dhimmicha naannoo Somaalee Ityoophiyaa fi mootummaa federaalaa waliin hiikuuf yaalaa tureera. Ammas hojjechaa jira.
Adeemsa kana keessas labsii yeroo hataattamaa hordofaa kan jiru koomaand poostiin jidduu galee dhimmicha akka tasgabbeessu, lammiilee nagayaarra miidhaan dabalataa akka hin qaqqabne, qaamoleen dhimmichaan shakkamanis seeratti akka dhiyaatan gochuuf hojjetamaa jira jedhan obbo Addisuun.
Ummanni naannoo lameenii barootaf nagaa fi jaalalaan waliin turaniiru. Mootummaan naannichaas mootummaa naannoo Somaalee Ityoophiyaa waliin qindoominaan hojjechaa akka jiru himeera.
Haaluma kanaan rakkoon amma uumame rakkoo qaama uummataa fi mootummoota naannolee lameenii akka hin taane hubatamuu qaba jedheera ibsichi.
Rakkoo mudates hiikuuf ummataa fi mootummaa naannichaa gochichaan guutumatti shakkuun osoo hin taane, maxxantoota ummataa fi mootummaarraa adda baasnee seeratti akka dhiyaatan ni hojjenna jedhan obbo Addisuun.
Qaamolee nageenya naannichaa; milishaa fi poolisii cimsuu fi ummatas gurmeessuun nageenya ummataa mirkaneessuuf ni hojjenna jedhaniiru.